Banyere Anyị - Nanjing Huade Nchekwa Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Nanjing Huade Nchekwa Equipment Manufacturing Co., Ltd. hiwere na 1993. Anyị bụ otu n'ime ndị na-eduga na ndị mbụ na-eweta na-elekwasị anya na imewe, ationgha, echichi nke akpaghị aka nchekwa usoro na nchekwa racking usoro.
Na 2009, HUADE wuru ụlọ ọrụ ọhụụ ya karịa mita 66,000 na Nanjing Jiangning Science Park. E nwere 5 ọkachamara osisi na ihe karịrị 200 tent nke equipments na tooling.
Na 2012, HUADE haziri ma mepụta nke izizi akpaghị aka nchekwa nchekwa Master mgbanye (kpọọkwa ụgbọelu na sistemụ mgbagharị).
A na-ewu ụlọ nyocha ọhụụ nke 40 mita dị elu maka sistemụ nchekwa akpaaka akpaaka na afọ 2020.
Ọhụụ nke Huade
Kọrọ ndị ahịa anyị ndị nwere ọgụgụ isi, ndị na-eri ọnụ karị, ọtụtụ ụzọ kachasị echekwaba ma nwee nchekwa nchekwa, na imepụta uru maka ụlọ nkwakọba nke ndị ahịa anyị.
Ozi nke HUADE
Iji nye ogo kachasị mma nke sistemụ nchekwa akpaghị aka yana sistemụ egwu na ndị mmekọ na ndị na - ekesa anyị.
Njirimara Mmepụta nke HUADE
Izu: anyị na-enwe ike ịmepụta usoro zuru ezu nke usoro nchekwa nchekwa, usoro nchekwa akpaaka.
Ihe ohuru ohuru na ihe okike bu isi mmalite nke HUADE. Anyị na-enyekarị ọhụụ kachasị dị ọhụrụ.
Bụ ntọala nke HUADE. Usoro anyị bụ ihe nchekwa dị mma ma dị mma maka ndị mmekọ anyị, ndị na-ekesa ya na ndị ahịa ya n'ihi nchara dị elu, ngụkọta nke nghazi na ụdị mgbanwe.
Ka anyị malite ikwu okwu gbasara ọrụ gị